इरान र इराकको सीमा क्षेत्रमा ७ . ३ म्याग्नेच्युटको भूकम्प | Janakhabar
इरान र इराकको सीमा क्षेत्रमा ७ . ३ म्याग्नेच्युटको भूकम्प
काठमाडौं, २७ कात्तिक । इरान र इराकको सीमा क्षेत्रमा गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परी कम्तिमा १२९ जनाको मृत्यु भएको छ । इराकको कुर्द शहर हालब्जा नजिकैलाई केन्द्रविन्दू बनाएर गएको ७ दशमलव ३ म्याग्नेच्युटको भूकम्पमा ३ सयभन्दा बढी घाइते भएका छन् । केही घाइतेको अवस्था गम्भीर रहेकाले मृतकको संख्या बढ्न सक्ने बताइएको छ । भूकम्पपछि दुवै देशका सीमावर्ती क्षेत्रका कयौं भवन ध्वस्त भएका छन् भने भौतिक संरचनामा पनि ठूलो क्षति भएको छ ।
भूकम्पपछि त्यहाँको विद्युत् र सञ्चार सेवा अबरुद्ध भएको छ । भूकम्प गएसँगै मानिसहरु अत्तालिएर घरबाट बाहिर सडकमा निस्किएको र उनीहरु सडकमै बसिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।
इराकको राजधानी बग्दादका नागरिक प्रार्थनामा जुटेका छन् । इरानको रेड क्रिसेन्ट नामक संस्थाका प्रमुख मोर्टेजो सलिमले कम्तिमा पनि ८ वटा गाउँमा ठूलो क्षति पुगेको खबर आएको बताएका छन् ।
इरानी समाचार संस्था आइआरआइएनएनले उद्धार टोलीलाई देशको पश्चिमी भागतिर तैनाथ गरिएको जनाएको छ । भूकम्पको धक्का टर्की र इजरायलमा पनि महसुस गरिएको बताइएको छ । -एजेन्सी
भारतमा नेपाली युवाको हत्या
नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चा पोर्चुगलको- ..
रोहिग्या शरणार्थीद्वारा न्यायको माग- ..
प्रवासी मोर्चाहरुद्वारा सरकारको दमन तथा- ..
एम करुणानिधिको निधन, अन्त्येष्टीका विषयमा- ..
जम्मु कश्मीरमा ४ जना भारतीय सेना मारिए
युएईद्वारा आममाफीको सदुपयोग गर्न आग्रह
खाल्डाेका कारण छोराको मृत्यु भएपछि …
नेपाली महिला बन्धक बनाउने पक्राउ
डा. केसीको पक्षमा अष्ट्रेलियामा प्रदर्शन
डा. केसीकाे समर्थनमा अमेरिकामा प्रदर्शन